အလျားလိုက်လေတိုက်စက် ဗဟိုပြု. TCWC50-C ကိုအလိုအလျှောက် - တရုတ် Weihai Tonglian Precision Machinery
TCWC50-C ကိုအလိုအလျှောက်အလျားလိုက်လေတိုက်စက် ဗဟိုပြု.
ကုန်စည်များ၏အမည်: TCWC50-C ကိုအလိုအလျှောက်အလျားလိုက်လေတိုက်စက် ဗဟိုပြု.
ကုန်ပစ္စည်း ID: q14
အဓိကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ parameters များကို:
လည်စည်းလှံတံကိုစွမ်းရည် 3600-3800 အပိုင်း / လူတန်းစား;
air ကိုထောက်ပံ့ရေး 0.4-0.6MPa;
တင်းမာမှုထိန်းချုပ်မှု constant တင်းမာမှုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု, အလိုအလျောက်ထောက်လှမ်း (အဆိုပါ optional ကို);
installation ရှုထောင် 3070mmx1100mmx1780mm;
ယခင်: LC-50-B က Precision ဒေါင်လိုက်အမျိုးအစားစက်
နောက်တစ်ခု: GH-2000 ကိုနှစ်ချက်ပန်ကာ solidification မီးဖိုထဲ
စက်အကွေ့အကောက်များသောအော်တို Cable ကို
အလိုအလျောက် coil အကွေ့အကောက်များသောပစ္စည်းကိရိယာ
Cantilever Baler အကွေ့အကောက်များသော
coil Winder စက်
အကြီးစား Duty အကြီးစားအချင်းထိပ်တန်း Horizontal စက်အကွေ့အကောက်များသော
Horizontal Band စက်အကွေ့အကောက်များသော
Horizontal Type Band စက်အကွေ့အကောက်များသော
လေနှင့်အတူ Reel Trailer
ခရုအကွေ့အကောက်များသောစက္ကူ Tube စက်
Sutomatic Center ကြမ်းတမ်း-လှံတံ Horizontal စက်အကွေ့အကောက်များသော
တိပ် Winder ထုတ်လုပ်သူ
ကြေးနန်း coil စက်အကွေ့အကောက်များသော
TWC-36 Horizontal NC ထုပ်စက်